Waves 2019 | Movie Review ျမန္မာ စာတန္းထိုး
Comedy Horror Talk-Show
အဖေရယ်အမေရယ် သားရယ်သမီးရယ်မိသားစုလေးယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာ နပမ်းအားကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အဖေဖြစ်သူက သူ့ခြေရာနင်းပြီးနပမ်းကစားသမားဖြစ်လာတဲ့သားဖြစ်သူကို အောင်မြင်စေချင်ခဲ့ပါတယ်…. အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတွန်းအားလည်းအရမ်းပေးခဲ့ပါတယ်…. သားဖြစ်သူတစ်ယောက်မိဘကတစ်ဖက်အားကစားကတစ်ဖက် ချစ်သူကတစ်ဖက်ဖိအားတွေနဲ့ပေါ့…. ဒီဇာတ်ကားလေးက မိသားစုမှာ အဖြစ်များတဲ့ ပြသနာတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး ပုံဖော်ထားပါတယ်…ပြီးတော့ ကာရိုက်တာတွေဟာအ‌ရှေ့တိုင်းဆန်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်…. IMDb.7.7 တောင်ရရှိထားပါတယ်….ဆုပေါင်း(၁၃)ဆုလည်းရရှိထားပြီး အခြားဆု (၃၆)ဆုအတွက်လည်း ဆန်ကာတင် စာရင်းဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်…ဘာကြောင့်ဆုတွေ ဒီလောက်တောင်ရခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာ ခံစားကြည့်ကြပါ…